धनगढी कारागार भित्रै ‘मिनि क्यासिनो’ : जुवा तास खेल्दै गरेको एक्सक्लुसिभ भिडियो ! | Diyopost
धनगढी कारागार भित्रै ‘मिनि क्यासिनो’ : जुवा तास खेल्दै गरेको एक्सक्लुसिभ भिडियो !
कैलाली, २३ मंसिर । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले जेलमा हुने बिकृतिको पटक पटक प्रश्न उठाए । तर, पञ्चायतकाल, बहुदल र गणतन्त्र पछि पनि नसुध्रिएको कर्मचारीतन्त्रले अहिले पनि मिलेर पुरानै विकृतिलाई निन्तरता दिइरहेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष उदाहरण बनेका छन्–कैलालीका जेलर महेन्द्र खड्का र सई अम्बादत्त भट्ट ।
यो वर्षको दशैमा ठूला भिआइपी जुवाडेहरुलाई पनि प्रहरीले समात्न सफल भयो । क्यासिनोका डनहरु बलराम सापकोटा बले देखि एयर डाइनेष्टीका प्रवन्ध सञ्चालक पवित्र कुमार कार्की समेत पक्राउ परे ।
पूर्व गृहराज्यमन्त्री इन्द्र बानियाँ प्रहरीकै सूचनाका आधारमा भगाइए । तर, कैलाली कारागार भित्रै प्रहरी र जेलरकै मिलेमतोमा बाजी नै राखेर जुवातास र गाजा खाएको भिडियो भेटिएको छ । दियोपोस्टले डायरी एक्सप्रेस साप्ताहिकको सहयोगमा उक्त भिडियो फेला पारेको हो ।
जेलर महेन्द्र खड्का र प्रहरी नायव निरीक्षक अम्बादत्त भट्टले पैसाकै चलखेलमा सुधार गृहलाई
क्यासिनो नै बनाएका छन् । यसरी जुवा खेलाउने र खेल्नेहरुमा कर्तब्य ज्यान, जबर्जस्ती करणी, डाका चोरीलगायतका मुद्दामा जेल परेकाहरु छन् ।
स्रोतका अनुसार यसरी जुवा तास खेल्नेहरुमा रोहित पालिवाल, बिर्खे कार्की, शेर बहादुर तामाङ, देब विष्ट, गगन ठकुल्ला, तुलाराम पाण्डे, मिनेट खड्का, योगेश चन्द, उपेन्द्र जैसी, मान बहादुर बिश्वकर्मा, हिक्मत सिंह, चित्र बहादुर ओली, खड्क तामाङ, शिवराज खड्का, कृष्ण साउद, बिमल चौधरी संलग्न हुनेगरेका छन् ।
सामान्य मानिसलाई पुरै शरिर छामेरभित्र पठाउने प्रहरीको कडा निगरानीमा कसरी जुवा तास, रक्सी र गाँजासमेत पु¥याईन्छ ?
यसरी अवैद्य खालका गतिविधिहरु नै सुधार गृहका नाममा राखिएका कैदीहरुको व्यवहार देखिनुले राज्यका केहि कर्मचारी र केहि प्रहरीहरुको अवस्थालाई चित्रण गरेको छ ।
जुवा तास खेल्दै गरेको एक्सक्लुसिभ भिडियो
जेलर महेन्द्र खड्का भन्छन्,‘हामी छानबीन गर्दै छौँ’
जिल्ला कारागार कैलालीका जेलर महेन्द्र खड्काले आफूहरुले भिडियो कसरी बाहिर गयो भन्ने विषयमा छानबीन गरिरहेको बताए ।
उनका अनुसार सिडिओ यज्ञराज बोहोराको नेतृत्वको टोलीले छापा मारेको थियो ।
‘हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौँ । यो भिडियो कसरी बाहिर गयो । अहिले हिजो सिडियो सापको नेतृत्वमा छापा मारियो । र ४० वटा मोबाइल भेटिएको छ,’ उनले दियोपोस्टसँग भने ।
शंकर ग्रुपका संचालक सुलभ अग्रवालको कालोबजारीः ३५ सयको थर्मल गनलाई २५ हजारमा बिक्री !
धादिङ्गमा कोरोना आशंका गरिएका एक ब्यक्तिको रिपोर्ट नेगेटिभ
चन्द्रागिरि नगरपालिकामा राहत वितरणः केही वडामा शुरु, केहीमा भोलीदेखि !
राजमार्गमा हिँड्दै मजदुर : काठमाडौंमा खानेकुरा सकियो, ७ दिन पैदल हिँडेर बर्दिया पुग्नुछ’ (फोटोफिचर)
लकडाउनको मौकामा नेपाली सेनाभित्र डरलाग्दो आर्थिक चलखेल : रक्षामन्त्रीकै छोरा संलग्न !
लकडाउनको १२ औँ दिन, यस्तो देखियो काठमाडौँ ! (फोटो/भिडियो)
अन्तराष्ट्रिय उडान बैशाख १८ गतेसम्म बन्द गर्ने सरकारको निर्णय
कोरोनाको कारण लिवियाका पुर्वप्रधानमन्त्री महमोद जिब्रिलको मृत्यु
कक्षा ११ र १२ को परिक्षा अनिश्चितकालका लागि स्थागित (सुचनासहित)